Mitambo yekudzidza mitauro yekuronga | Linux Vakapindwa muropa
Mitambo yekudzidza mitauro yekuronga
Isaac | | Linux Mitambo, Resources
Asi kunze kweCodeCombat pane zvimwe, pamwe iwe unoziva Kukanda, kunyanya kana uine Raspberry Pi, uye iri software yaunogona kudzidza mamwe epurogiramu epfungwa, kunyanya akagadzirirwa vana, nekuda kwemupepeti unoshanda nemifananidzo yakajeka, ichibvumira. iwe kugadzira mitambo yakapusa pakati pezvimwe zvinhu. Asi Kukanda hausi mutambo pachawo, saka hatisi kureva kune urwu rudzi rwepurojekiti. Asi Iwe unogona kufarira kuziva mapurojekiti senge:
Vim Adventures: Nemutambo uyu unonakidza, iwe unozogona kudzidza chirongwa neakakurumbira Vim. Iyo zvakare iri online, saka unogona kuinakidzwa kubva kune chero sisitimu yekudzidza iyo vim mutauro.
Tarisa Io- Mune ino kesi, iwe unenge uchitamba uchitamba munyika umo iwe unofanirwa kuongorora hunyanzvi hwako hwekuronga. Kunge yapfuura, iri online.
Code Mudzidzi: zvinopfuura mutambo pachawo, iwo ari epamhepo kurovedza kudzidza HTML uye CSS programming mutauro kuronga mawebhusaiti.
Schema Vhesi: yakapusa zano mutambo wakanangana nePostgreSQL dhatabhesi uye nekudaro uchafanirwa kushandisa SQL mirairo kufambira mberi. Ichowo mutambo wepamhepo.
Cee Bot: iwe unozogona kurarama aya mafambiro uye kudzidza uchishandisa programming mitauro senge C #, Java, uye C ++.
Python Dambudziko: Pakupedzisira, Python mutauro unonyanya kuzivikanwa mazuva ano uye uri nyore kudzidza, asi zvichave zviri nyore kutamba uyu mutambo wevhidhiyo maunopasa iwo mazinga nekutenda kune ako Python makodhi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Mitambo yekudzidza mitauro yekuronga
Chinyorwa chinonyanya kufarira chokwadi; Iko kusanganisa kunoratidzika kwandiri kunge iri zano rakakura, sezvo ichivaraidza pamwe nekudzidzisa; Uyezve, uri mutambo, haungove nedambudziko rekunyora kodhi chete asiwo yekuona zvichaitika zvinotevera. Ndichaedza vamwe kuti ndione kuti zvinoshanda sei, ndiri pakati peCodecombat ne python Dambudziko ... ndichaona hehe.
Ndatenda zvikuru nemupiro wako!
Yakanaka, ini ndoda kutamba: 3
Ini ndanga ndichive nekubudirira mune rangu basa kudzamara ndaona ichi chinyorwa uye ndotora mutambo ...
… Ndinofunga iyo intratet ichanonoka mazuva maviri
Pindura ku clown
Ndasuwa Ruby murwi (kudzidza kuronga muRuby). Inonakidza kwazvo uye muropa.
Zvauri zvakapusa nekuti hazvishande musikana zvakanaka uye hazvindisiye ndakarinda kana jongwe saka handichisiri kutamba mutambo pamusoro! kunzwisisa ?? kana kudzokorora.
Pindura kune el_inspirado
Ini ndinoona sekusaremekedza uye zvisina hunhu kuti iwe unoisa iyi mhando yekutaura pane yeruzhinji peji, kana iwe usingafarire zvirimo mune ino peji, ingozviteerera.
Pindura kuna chulosinH
Uye ndinoona zvichisiririsa nevanhu vakaita sawe "Weki" uye "el_inspirador" kuenda vasina hunhu, kuremekedza zvishoma basa revatinoshanda navo asi ndinofungidzira kuti muchava mhombwe.
Che izvo zvinorwadza kuti hapana shanduro muCastilian. Fungidzira mukomana wemakore manomwe ekudzidza zvirongwa uye Chirungu panguva imwe chete!
inoita 7 mwedzi
Ndiri kufarira kwazvo kuronga kwevana nekuti ndinotenda kuti tekinoroji iro ramangwana revana.
Mumhuri mangu takatoyedza Code.Org, Kukwasva uye Kukwasva Jr. Super yakakurudzirwa!
Zvakare, vana vangu vanodzidza muchikoro https://www.crackthecode.la/ Ivo vanovadzidzisa zvinhu zvepamusoro zvinonakidza nezve kodhi, chirongwa uye tekinoroji.
Iyo yegoridhe zera reSpanish software uye Spanish yemahara software
Iko kuonekana kweChannel kwasvika mumakumi matatu nematatu